StumbleUpon na-aga n'ihu Nri My Blog | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 18, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
N'abalị a, m na-enyocha ụfọdụ saịtị na-ezo aka maka blọọgụ m ma enweghị m ike ịlele ma hụ ọnụọgụgụ nke pụtara karịa karịa ndị ọzọ - StumbleUpon na-eme ka ọtụtụ okporo ụzọ gaa na saịtị m! Enwere ọtụtụ saịtị ntinye akwụkwọ na weebụ, mana StumbleUpon nwere otu atụmatụ bara uru nke ọ na-enweghị nke ndị ọzọ nwere - ha na-enye njikọ site na mmasị nwere njikọ.
Mgbe ị na Ibu Ibu StumbleUpon toolbar (nke ị kpamkpam kwesịrị), gị sụọ ngọngọ na saịtị ma nye ha mkpịsị aka ukwu ma ọ bụ mkpịsị aka gị ala. Ka ị na-ewepụta akụkọ ihe mere eme, saịtị ndị StumbleUpon na-eziga gị na nke ọzọ dabara adaba dabere na o nwere ike inye gị isi mkpịsị aka. Ọ bụ usoro dị ịrịba ama nke nwere ọgụgụ isi.
Ikekwe dị mkpa karịa ọnụọgụ ndị ọbịa nke StumbleUpon na-ezitere m bụ eziokwu ahụ bụ na ọ bụ saịtị na-ezo aka na ọnụego ibiaghachi dị oke ala! Ihe dị ka ọkara nke ndị ezitere na saịtị m pịa site na post ọzọ ma ọ bụ ibe na weebụsaịtị. Nke ahụ bụ ọnụego dị ala, dị ala karịa saịtị ọ bụla na-ekwu.
N'adịghị Slashdot, Digg, na ndị ọzọ na isi ibe edokọbara maqbx chekwebe, StumbleUpon nwere n'ezie "Midas aka", na-enye gị blog ma ọ bụ weebụsaịtị na okporo ụzọ nke ga-ahụ ọdịnaya gị dị mkpa dabere na profaịlụ ha mepụtara na ihe ndị na-amasị gị na ihe ndị na-achọghị ya.
Nnukwu ekele nye otu n'ime ndị ọzọ na-eduga ndị na-ezo aka na weebụsaịtị m, Bittbox. Ha ezigala ọtụtụ okporo ụzọ site na ịtinye m na blogroll ha karịa ka m kwesiri inweta maka inyere ha aka. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ ma ọ bụ onye nwere ọsịse nwere nghọta, jide n'aka na ị ga-ahụ saịtị Bittbox ma debanye aha maka nri ha. Ọ bụ ihe ịtụnanya na saịtị na zuru ezu Nkuzi na tọn downloads.
Rịba ama na Twitter na-arị elu ndị na-ede aha! Ọ bụrụ na ịtọbeghị Twitterfeed ma ọ bụ tinye usoro ntinye akwụkwọ maka blọgụ gị ka edepụtara na Twitter, ị ga-emerịrị ya taa!
Nov 19, 2008 na 9:45 AM
Na mgbakwunye na ikenye ibe gị na isi mmalite ndị a Wepụta oge iji sụọ ngọngọ ma ọ bụ Twitter gbasara enyi. Na-ajụghị, ha ga-eweghachi ihu ọma, ma enwere ntụkwasị obi karịa mgbe onye ọzọ na-ekwu maka gị, Retweets, Stumbles or Diggs.
Nov 1, 2010 na 9:26 AM
M na-agbagha mgbe nile ebumnuche na uru nke ịba aha mmadụ. Agbanyeghị na ahụrụ m okporo ụzọ dị na blọọgụ anyị site na StumbleUpon, ọ tụrụ m n'anya na ndị mmadụ na-eji ọrụ ahụ.
Nov 1, 2010 na 9:31 AM
Anaghị m ekwenyeghi @chuckgose. M na-eche ụfọdụ folks dị ndammana gravitate dị iche iche ngwaọrụ. Enwere igwe mmadụ agụụ nọ na nsọtụ ọzọ nke saịtị ndị ahụ, n'agbanyeghị. Y’oburu n’itinye ibe edokọbara ebe a nwere ike ịchụpụ okporo ụzọ dị mkpa, yabụ gịnị kpatara ya?
Nov 1, 2010 na 10:58 AM
Otu nsogbu na iji ịsụ ngọngọ n'agbanyeghị na ịdabere na hits bụ ole n'ime ha na-emekọrịta na saịtị gị? Achọpụtala m ole na ole na saịtị m ka ọ na-apụta na ụfọdụ ọnụọgụ dị elu site na ịsụ ngọngọ, okpukpu atọ ihe ọ bụla na-eduzi okporo ụzọ, mana ọnụọgụ nke okwu ahụ ka dị. Nkezi oge na saịtị agbanwebeghị. Amaara m na okporo ụzọ bụ okporo ụzọ, mana n'otu oge ahụ, kedu ka ọ si baa uru ma ọ bụrụ na ndị mmadụ kụrụ saịtị ma hapụ n'oge dị mkpirikpi ma ghara ịga na ibe ọ bụla…
Dị nnọọ ụfọdụ echiche na azụ nke uche m, Ga-amasị m ịnụ ihe echiche gị na ya 🙂